Daawo: Mid ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya ciidamada diidan muddo kororsiga Dawlada Farmaajo oo si adag uga hadlay Mawqifkooda. |
Daawo: Mid ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya ciidamada diidan muddo kororsiga Dawlada Farmaajo oo si adag uga hadlay Mawqifkooda.
Muqdisho(GNN):-Ciidamada Militariga ee kasoo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariisimo cusub ka sameystay xaafado ka tirsan Degmada Howl-Wadag gaar ahaaan Xaafadaha u dhow madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Cabdulqaadir Maxamed Warsame oo ah Gaashaanle sare oo kamid ah saraakiisha hoggaaminayo dagaalka, oo warbaahinta kula hadlay aagagga dagaalka ee Degmada Howl-wadag, ayaa sheegay in ciidamada diidan muddo kordhinta ay la waregeen gacan ku heynta Xaafadaha Shanta-Geed, Isgoyska Bakaaraha, Sayidka iyo Hotelka Weheliye.
Halkaan Guji Oo ka daawo hadalka Gaashaanle Sare Cabdulqaadir